The Complete Guide na American olulu ehi Terrier - Dịrị
Na American Pit Bull Terrier (APBT, Pittie, ma ọ bụ Pitty) bụ ezigbo anụ ọhịa nke diri ọtụtụ ihe kemgbe ụwa.
Site na ịkpa ókè na mmegbu na ọgụ nkịta, ụdị a nwere ike ịnwe aha dị egwu mana APBT nwere nghọtahie dị ukwuu.
Kama, Pit Bull bụ ihe atụ magburu onwe ya, siri ike ma muscular nwere ụdị agwa mara mma nke na-aba uru maka ọrụ yana nkịta ezinụlọ.
Oge erugo ịmaliteghachi Pit Bull ma gosipụta ezi ịma mma nke ụdị a. Anyị ekpuchiwo ihe niile ịchọrọ ịma!
Kedu ihe bụ American Pit Bull Terrier?
Powerhouse nke a pooch
Obi ndi knight
Esi zụọ otu olulu
Fun eziokwu: Pitties n'anya na-ata.
Nsogbu ahụike nke nsogbu nke American Pit Bull Terrier
Na-enye gị Pitty nri kwesịrị ekwesị
Ọnụ ego nke inwe Pit Bull
Chọta ndị kachasị mma Pit Bull
Mmechi: Ndi American Pit Bull Terrier maka gị?
Iji mụta banyere mmalite nke American Pit Bull Terrier, anyị kwesịrị ịlaghachi azụ na narị afọ nke 19 England.
Ehi na anụ ọhịa bea bụ egwuregwu ọbara nke ahụ gụnyere ịtụkwasị nkịta n’elu ehi ị jidere ma ọ bụ bear maka ihe ntụrụndụ. Ndi bekee bidoro ịzụlite nkịta nkịta nwere njimara egwuregwu siri ike maka ọrụ a, ya mere ọmụmụ nke Bull na Terrier ụdị.
N’afọ 1835, akpọrọ egwuregwu ndị a iwu na-akwadoghị n’ihi agwa ọjọọ ha. Na nwute, nke a butere ajọ omume ọjọọ ọzọ: ọgụ nkịta.
Nkịta agha ga-agbanwe usoro akụkọ ihe mere eme maka ụdị a ma ọ bụghị nke ka mma.
Ndị mmadụ na ọgụ na nkịta bidoro webata mkpụrụ ndụ ihe nketa ọhụrụ n'ime ngwakọta Bully iji mepụta akara nkịta ndị na-eme ihe ike ike.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ha gbalịsiri ike ịmepụta ụdị anụ ọhịa naanị na-eme ihe ike na nkịta ma agaghi ata ndi mmadu aru. American Pit Bull Terrier nwere àgwà a ma nwee nke okike enweghị ọchịchọ ịwakpo ụmụ mmadụ.
Site na nkịta na-alụ ọgụ na nkịta nwanyị
Mgbe ndị kwabatara bidoro wetara ụdị anụ ndị Terrier dị mma na nke na-echebe ha na US, ha nwere ndụ ọhụụ na-adịghị anya site n'ọbara na mgbukpọ nke mgbaaka nkịta.
Nkịta ndị a dịgasị iche nkọ, agile, ike na njikere. Ha bụ ndị mmụta ngwa ngwa bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi ime ihe na-atọ ụtọ.
Ejiri isi iyi egwu dị ka nkịta ugbo , ma hà so ndị nwe ha gaa njem ịchụ nta ma ọ bụ na-echekwa anụ ụlọ na ihe onwunwe. E jikwa ha eme ihe nkịta nanny , n’ihi ịdị nwayọọ n’obi ha n’ebe ụmụaka nọ.
Otu ohuru nke Bull Dog weputara site na ogwu ogwu Terrier a, o kariri kariri nke mbu ndi Bekee. Akpọrọ ya aha ahụ American Pit Bull Terrier , na-anata ọdịiche site na UKC na 1898.
AKC ga-emesị mata ụdị ìgwè ahụ, ma ọ bụghị n'enweghị obere mgbagwoju anya.
Nnukwu nghọtahie banyere Pit Bulls
Ọ bụzị na 1930 ka AKC matara American Pit Bull Terrier dị ka onye dị ọcha.
Ugbu a, ebe a ka ọ na-agbagwoju anya. Mgbe emesiri mata udiri a, AKC gbanwere aha ya si na American Pit Bull Terrier ka Onye America Staffordshire Terrier (Ọrụ).
Ha mere nke a kpochapụ akụkọ banyere ịlụ ọgụ na nkịta site na aha udiri. Ka oge na-aga, nkịta debara aha dị ka American Staffordshire Terriers bụ bred dika ndị ọkọlọtọ , na-edebe ụfọdụ àgwà ndị mere ka ọ pụọ iche.
Banyere nkịta ndị na-edeghị aha ma ọ bụ bred na ọkọlọtọ, ha ghọrọ ọbara na-aga n'ihu nke American Pit Bull Terrier nke oge a.
American Pit Bull Terrier vs American Staffy: ha bụ otu?
Kemgbe AKC mere ngbanwe aha akụkọ ihe mere eme, otu ajụjụ na-aga n'ihu na-agbagwoju ndị hụrụ nkịta n'anya.
Ndi American olulu ehi ehi Terrier na Onye America Staffordshire Terrier ụdị dị iche iche abụọ ma ọ bụ ha bụ otu nkịta?
Fọdụ ga-arụ ụka na ha bụ otu, mana enwere ndị na-ekwu na Staffy pere mpe ma, n'ozuzu ya, ọ dị iche na usoro.
Nke a bụ ụfọdụ ọdịiche dị iche n'etiti ọkwa abụọ:
A na-azụlite Staffy dị ka a gosi nkịta , mgbe Pittie adịghị atụle maka ngosi.
Nke Staffy nke anụ ahụ bụ dị mkpụmkpụ, na-ebu ibu ma sie ike .
A na-ahụrịrị ụdị abụọ ahụ nkịta ezinụlọ dị mma na omume ọma. Mgbe ọ bịara ala na nke onye bụ nke gị, ya n'ezie niile na-adabere na mmasị onwe onye.
Na-achọ itinye ego na nkịta ga-esonye na asọmpi? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ndị Staffy nwere ike bụrụ ihe kacha mma.
Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta ibe gị nke na-agaghị emechu gị ihu, APBT bụ ụzọ ị ga-esi.
Eziokwu American Pit Bull Terrier eziokwu
Ka anyị banye n'ụfọdụ factoids na-adọrọ mmasị ma na-enye nkọwa banyere Pittie!
N'ihi na aha Pittie dị ka nkịta dị ize ndụ, ọ nwere ike ịbụ machibidoro n'obodo ụfọdụ ma ọ bụ steeti (dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German na Eriri igwe ). Ọ bụrụ na ị nwere Pittie ma na-eme atụmatụ njem, gbaa mbọ hụ na ị maara ihe iwu bụ ebe ị na-aga.
Na nanny dog ​​omenala n'ezie onye American Pit Bull Terrier nọchiri anya ya. Naanị jụọ ndị a ma ama olulu: Petey , site na kpochapụwo na-egosi Little Rascals, Mkpanaka , Buster Brown akpụkpọ ụkwụ mascot, na Nipper , nkịta RCA.
N'oge WW1, akwụkwọ mmado mgbasa ozi jiri ụdị nkịta dị iche iche nọchite anya mba ọ bụla metụtara. United States họọrọ American Pit Bull Terrier n'ihi ya obi ike na iguzosi ike n'ihe.
Pitu ehi adịghị nwere kpochidoro jaws. Enweghị usoro anụ ahụ na-enyere ọrụ nke 'mkpọchi'. Echiche a na-ezighị ezi na-agbakwunye aha ha dị ka nkịta na-eme ihe ike.
Enwere ike iji usoro anụ ahụ nke American Pit Bull Terrier tụnyere nke aha ọjọọ Devid Ihe oyiyi nke Michelangelo. N'ezie ọ bụ izu oke mọzụlụ.
Ọ bụrụ na enwere nkịta dị iche iche, Pull Bull bụ ya. Short na stocky, ọ esịmde a dị elu nke 21 sentimita asatọ (53 cm) ma tụọ ihe dị ka 85 n'arọ (38 n'arọ)
Akwara ruplel n'okpuru uwe na-egbuke egbuke mkpụmkpụ ụkwụ na ahụ gịrịgịrị nke ahụ bụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Isi dị obosara na nnukwu jaws na-atụ ụjọ.
Uwe American Pit Bull Terrier bụ ọ bụghị hypoallergenic , ma ọ na-agbada ala . Kootu chọrọ nlekọta dị ntakịrị. Otu ndozi n’izu zuru ezu iji mee ka kootu ya dị mma.
Uwe ajị agba dị mkpụmkpụ nwere ike ịnwe na palette nke ọmarịcha agba, gụnyere acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, nwa, ọcha, na brindle.
Anya obosara nke Pitty mara mma karịsịa. Ọ bụghị naanị na ha nwere ike ịbụ ndo dị mma nke edo edo, isi awọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ kama ha na-egosipụta ịhụnanya na ịhụnanya.
Chọrọ ịhụ ka akwara ndị ahụ nọ n'ọrụ? Lelee vidio a nke gosipụtara olulu ehi na-awụpụ mgbidi:
Ntị American Pull Bull Terrier: cropped or uncropped?
Ugbo ala America nke na-enweghị ntị na-emeghe na-aghọwanye ebe nkịtị dị ka mmeghachi omume megide nkịta ntị na-egbutu uru traction. Dị ka o kwesịrị ịdị, ntị na-apịa n'akụkụ akụkụ nke isi ma dị velvety na aka.
Na ọkọlọtọ izu na-akpọ oku maka American Pit Bull Terrier nwere nti ntị, nke na-apụta mgbe mpụta ntị mpụta bụ ịwa ahụ ewepụ iji nye nkịta nkịta, anụ ntị anụ ọhịa wolf.
Omume a abaghị uru ọ bụla ewezuga ime ka nkịta bụrụ ihe na-amasị ndị ikpe na ihe ngosi nkịta.
N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta olulu olulu nwere ntị ma ọ bụ nke na-emegheghị, ebe nke a na-ewu ewu na ụdị a.
Jaws dị ike nke nwere ike ijiri 235 PSI
Otu n'ime njirimara Pit Bull bụ nke ya jaws siri ike . Ha hụrụ n'anya na-ata ata, ma ọ bụrụ na a kpalie ha n'oge egwuregwu nke tug-o-war nwere ihe eji egwuri egwu, ga-ata ahụhụ ma jidesie ya ike na mkpebi siri ike.
Kedu otu ike aha ọjọọ Pit Bull si ata? Ka anyị jiri ya tụnyere ụfọdụ ụdị nkịta ndị ọzọ siri ike inweta echiche.
American Pit Bull Terrier na nke American Bulldog
American Bulldog bụ ụdị ọzọ nwere nkwonkwo muscular, isi buru ibu na jaws. Ọ nwere nri siri ike na 305 PSI.
Ọ nwere akụkọ yiri ya na Pit Bull, ya na mmalite ozuzu ya na England. A zụrụ ya maka ịchụ nta na ịkọkọta anụmanụ, ya mere ọ dịkwa ike ma nwee ike.
Bulldogs ndị America
Nnukwu ihe dị iche n’agbụrụ ndị a bụ ihe na-akpali ha igosipụta ike ha dị ukwuu. Olulu ehi bụ ụdị anụ ahụ, ọ bụghị nke na-eme ihe ike n'ebe ụmụ mmadụ nọ. Bulldog, n'agbanyeghị na ọ hụrụ ezinụlọ ya n'anya, nwere ike ịbụ enweghị atụ n'ebe ndi mmadu no amaghi.
Mgbe ị na-atụle ike nke nkịta abụọ a, Bulldog bụ onye mmeri ọ bụla n'ihi ike dị elu na enweghị atụ.
American Pit Bull Terrier na Boxer
Na Oku okpu nkịta dị n'azụ Ogidi Ebu ya na ike nke aru 230 PSI.
Nkịta a dị ogologo ma dị egwu, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụ. Ọ nwere ogo dị elu ma chọọ mmega ahụ oge niile.
Oku dikwa nkịta ezinụlọ dị ebube , dị nnọọ ịhụnanya ma na-atọ ụtọ. Ha anaghị enwe otu ọgụ ma ọ bụ aha nkịta nkịta nke Pitty.
Agbanyeghi na udiri anumanu abuo a nwere ihe ruru otu aru, n'ihi ihe nketa Pit Bull, asọmpi na nchedo, o siri ike ikwu na o nwere ike imeri Onye Boxer.
American Pit Bull Terrier na Rottweiler
Ndị dike Onyekwere aru ike bu 328 PSI . Pup a bụ ikike a ga-ahụ maka mgbe ọ bịara n'ike, ntachi obi, na ntachi obi.
Bred dị ka a na-arụ ọrụ nkịta , Rottweiler dị mfe ịzụ na ọgụgụ isi nke ukwuu. Ahụ, ọ bụ igwe!
Tụnyere Pit Bull, Rottweiler nwere ihu mgbe ọ bịara n'ozuzu ya ume na ume.
American Pit Bull Terrier na German Onye Ọzụzụ Atụrụ
Na Onye Ọzụzụ Atụrụ German (GSD) nwere a 238 PSI , nke na-adịghị anya site na Pit Bull.
Umu anumanu abuo a di iche na odighi anya, ma ha abuo nwere aha n’adighi nma. A na-ahụkarị ndị ọzụzụ atụrụ German na ndepụta mmachibido iwu ma nwee oke nchebe omume.
GSD bu otu n’ime nkịta nwere ọgụgụ isi kasị ukwuu n'ụwa. Ọ bụ nhọrọ a họọrọ maka ndị uwe ojii, ndị agha, na ọrụ ọgwụgwọ. Ọzụzụ na-abịa n'ụzọ dị mfe na pooch a na-arụ ọrụ, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na GSD bụ onye na-agba mgba kacha elu na ihe nkịta.
Mgbe ị na-atụle ike, ụdị abụọ a na-abịarukwa nso. Ọ bụ ezie na ike ụta ahụ yikwara, GSD bụ ngwa ngwa na ngwa ngwa . Ọgụgụ isi ahụ adịghị emerụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, Pit Bull bụ muscular ma kpebisie ike, na-enwe ike ịghara ịda mbà.
Ndi American Pit Bull Terrier nwetara aha ngwa ngwa dika 'ihe ojoo' n'agba nkita. Ewoo, oge egwu a dị egwu na-eti ìgwè ahụ ahụhụ, ọbụnadị n'oge a.
Eziokwu bụ na a kpachapụrụ anya nke mkpụrụ ndụ nke Pittie iji mepụta onye agha dị oke ọnụ, mana na ntọala nke mkpụrụ ndụ ihe nketa mbụ ya bụ obi dị nro .
American Pit Bull Terriers bụ ọgụgụ isi ma dịkwa njikere ime ihe na-atọ ụtọ. Ha na-enweta nke ha ikike egwuregwu, mkpebi siri ike na obi ike site n'ụbọchị nke ehi baiting.
Ha na asọmpi ma dị mfe ịzụ. Nke a na-eme ka ụdị a pụọ ​​mgbe a bịara n'ịsọ asọmpi nkịta.
Ka anyị ghara ichefu oge a kpọrọ nkịta a nkịta nanny, n'ihi ha obi okike maka umu . Ebu ehi na-eguzosi ike n'ihe ma na-echebe ezinụlọ. Ọ bụrụ na-ekpe naanị ruo ogologo oge, nkewa nchegbu ga-aba.
Dị ka nkịta ọ bụla, iji hụ na nwa nkita Pit na-etolite iji gosipụta àgwà na omume kachasị mma, mmalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nrube isi bụ iwu.
Kpachara anya: Bredị a abụghị maka onye ọ bụla!
Ikwesiri ịdị njikere itinye ego na oge, ego, na ume ilekọta Pit Bull. Nke a abụghị nkịta nkịta na-adịghị mfe ị ga-enwe ike ịbanye n'ime obere akpa gị oge ọ bụla ọ masịrị gị!
The Pit Bull bụ 100% raara onwe ya nye ezinụlọ ya, na-enwe a siri ike na-echebe. Mana ọ nwere ike iburu ibu ọrụ ahụ kwere na ọ bụ ya ndu mkpọ.
Dị ka nna ukwu, ịkwesịrị gosi na ị nara ọrụ . Nke a pụtara ịduzi ma na-agbazi aka dị ike, na-akwado nkwado dị mma.
Ọzụzụ kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe , oge. Nke a bụ naanị ụzọ ị ga - esi merie isi ike nke njirimara nke ụdị ahụ.
Isi ike tinyere Pitty's ọgụgụ isi na mkpebi siri ike mee ya ole na ole ma ọ bụrụ na azụghị ya nke ọma. Omume a nwere ike ịbịa dị ka ihe egwu ma ọ bụ dị egwu, ọkachasị mgbe ọ na-abịa site na nkịta na-adọrọ adọrọ.
Ọ dị mkpa icheta na ihe ndị a bụ njirimara nke ọtụtụ ụdị nkịta na-egosipụta nke ọma. Ekwela ka anya, akụkọ ihe mere eme, na akụkọ a na-ekwenyeghi ekwenye na-egbochi echiche gị dum gbasara ụdị a.
Trainingzọ ọzụzụ 3 kachasị mma maka APBTs
Cheta na ọzụzụ dị mkpa iji Pit Bull. I nwere ike iku onye ọkachamara nkịta ọzụzụ ijikwa ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iburu reins, ndị a kapịrị ọnụ ụzọ ọzụzụ ga-eweta ihe kachasị mma na Pitty gị.
1. Mmekọrịta oge mbụ
Nke a kwesịrị ịbụ ntọala nke ọchịchị ọzụzụ nkịta ọ bụla n'agbanyeghị agbụrụ ahụ. Inweta nwa nkita gi na nmekorita ya ụmụaka ndị ọzọ, ndị okenye, na nkịta ga-eme ka ọ ghara ịdị nkọ na ihere ka ọ na-etolite.
Ọ bụrụ na ị nwere nkịta ndị ọzọ, hapụ nwa nkịta ọhụrụ gị zute ha ma kpọọ n'èzí.
Nke ahụ kwuru, sị, Pit Bull breed na-eme nke ọma na ụlọ nwere ogige gbaa ogige . Obere ụlọ anaghị enye ohere zuru ezu iji kpoo ma chọpụta.
Gburugburu mpaghara gị ogige nkịta were Pitty gị ebe ahụ na ngwụsị izu ka o wee nwee ike ịhụ na ịnụ ísì ọhụrụ. Malite site na ịchekwa ya na inye ya ohere ịbịakwute nkịta enyi na enyi.
Ekwela ka Pit Bull kwụsịrị nkwụsị ahụ na ogige nkịta. Ọ bụrụ na ọgụ nkịta daa, mkpebi ya ga-eme ka ọ lụọ ọgụ ruo n'isi. Eddị a agaghị ala azụ mgbe a kpasuru ya iwe.
American Pit Bull Terrier n'aka nri ( isi mmalite )
N'ihi akụkọ ihe mere eme ha na ọgụ nkịta, Pit Bulls nwere ọchịchọ ebumpụta ụwa gosi iwe megide nkịta ndị ọzọ .
Ee, mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe dị mkpa iji mee ka ọ kwụsị, mana ọzụzụ nrube isi ga-enye ya obi ike na ụkpụrụ ụkpụrụ nke ịgbaso site na gị.
Dịka ekwuru na mbụ, Pit Bulls nwere mmasị ịgbaso iwu ma ha nwere tọn ike .
Mmakọ irube isi na ọzụzụ agility ọ bụghị naanị ụzọ magburu onwe ya unu abụọ ga-esi nwee njikọ, kama ọ ga-eme ka ọ kpalie, nyere aka gbaa ume, ma kụziere ya ka ọ legara gị anya mgbe ọ na-eme njem ọzọ.
N'ihi ike Pit Bull Terrier nke America, mmezi na ntaramahụhụ na-abụkarị ndị a na-atụkarị anya na ọzụzụ nrubeisi, mana ọ anaghị arụ ọrụ mgbe niile maka ìgwè a.
Gbalịa iji ọzụzụ clicker ma ọ bụ ụgwọ ọrụ iji kpalie Pit Bull gị site na iji mmetụta dị mma.
3. Canine Ezi akwukwo ndi obodo
Ndi AKC meputara program a na asambodo a. A na-anwale nkịta n'ọtụtụ ọrụ iji chọpụta nrube isi na omume. Ọ bụrụ na nkịta nwere ike igosipụta na ọ nwerela ikike ọ bụla, ọ ga-enweta Asambodo Ezigbo Obodo.
N'ezie, nkịta ọ bụla nwere ike ịga maka mmemme a, mana m kwuru ya n'ihi na ọ nwere ike ịba uru karịsịa maka Pull Bulls.
Dabere na ebe ibi, ọ nwere ike isiri gị ike ịgbazite ụlọ n'ihi iwu ma ọ bụ onye nwe ụlọ nwere ike ịla azụ n'ihi aha otu ahụ. Inye asambodo a na-egosi na nkịta gị agabigala ọzụzụ na nnwale iji guzobe ezigbo agwa .
Emecha mmemme dị ka nke a bụkwa ihe ọzọ na-azọ mbugharị iji kwusi ajọ nkịta ọjọọ Pittie.
Nwere ike ịchọta ndị nyocha mmemme AKC Ebe a .
Ogo ume nke ụdị a dị n'ebe ahụ, na-ahapụ gị ka nwa bebi na-ebibi ihe ma ọ bụrụ na ọ naghị emezi mmega ahụ ya. Na ọ na-enwe obi ụtọ , Ya mere, ị ga - ejide n'aka na ọ na - eme ike a niile, hapụ ya ka ọ gbanwee ya na akpụkpọ ụkwụ gị na arịa gị.
Na-atụ anya ịrara ma ọ dịkarịa ala otu awa kwa ụbọchị igwu egwu oge. E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi jiri Pit Bull gị mepụta ihe.
Gaa mkpagharị gburugburu agbata obi.
Gaa maka jog n'okporo ụzọ ụkwụ.
Na-arụ ọrụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma nwee obi ụtọ na ogige nkịta.
Debe nhọrọ nke ihe eji egwuri egwu dị mma maka ụbọchị mmiri ozuzo. Olulu ehi na-ata ata!
Melite ihe ihe mgbochi n'azụ ụlọ iji na-eme mkpọtụ.
Nke a bụ ụdị mkpụrụ osisi gbara gburugburu na ahụike dị mma. Ogbe ehi ahụ nwere ogologo ndụ ogologo n'ogologo 12 ruo 16 afọ .
O nweghi ụdị nkịta ọ bụla na-anaghị arịa ọrịa mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ole na ole, agbanyeghị, Pit Bull adịghịkwa iche.
Nke a bụ nsogbu ahụike America kachasị elu nke ga-ama.
Hypothyroidism: Ọrịa Ọrịa a na-awakpo thyroid mgbe ụfọdụ emeghị ụfọdụ hormone nke ọma. Ọ bụrụ n’ịchọpụtaghị ịdị n’uche nke uche, ike ọgwụgwụ, mmega ahụ ekweghị ibe nọrọ, na oke ibu na Pittie gị, kpọọ onye nlekọta anụmanụ maka ịlele.
Nfụkasị ahụ: Olulu olulu na-adịkarị mfe akpụkpọ allergies na-ahapụ ha na patches nke akọrọ, itchy akpụkpọ. Luckily, e nwere ọtụtụ eke na kenyere ọgwụgwọ ị pụrụ ịnwale. Naanị gwa dọkịta gị okwu ka ị chọta azịza kacha mma maka nkịta gị.,
Ọrịa obi: Maka American Pit Bull Terrier nke a nwere ike ịbụ n'ụdị nrụrụ valvụ, adịghị mma, na nkwarụ obi obi.
Hip Dysplasia: Nke a bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-akpata uto na nkwarụ nke nkwonkwo hip. Hip dysplasia na-egbu mgbu nke ukwuu, n'ikpeazụ na-ebute ngagharị na ngagharị.
Ibu bụ ihe ị ga - achọ ile anya mgbe ị na - ahọrọ nri nri American Pull Bull Terrier.
Na-ahọrọ akọrọ akọrọ dị elu nri nkịta nke ahụ na-ekewa n'etiti nri abụọ kwa ụbọchị . Maka Pull Bull, a na-atụ aro ka ị jee ozi karịa Iko 1.5 ruo 2.5 maka oriri kwa ụbọchị.
Ebe ọ bụ na nrịanrịa anụ ahụ bụ nsogbu nkịtị maka ụdị a, gwa dọkịta gị banyere nri iji zere yana nri ndị ọzọ nwere ike inye aka mee ka ọnọdụ ahụ ka mma.
Ọkpụkpụ Red Imi
Ọ bụrụ na ị hụrụ ìgwè a n'anya ma chọọ ịgafe na nwa nkita Pull, dị njikere iri nri mgwakota agwa siri ike.
Ngwunye nwa ehi na-acha ọcha nke nwere oke anụ ga-efu ebe ọ bụla $ 2000 ka $ 20,000 . Pfọdụ Pittie iche, dị ka a Blue Imi Pitbull na a Red Imi Pitbull , nwekwara ike ịkwụ ụgwọ karịa.
Nwa nkita Pittie nwere oke ọbara ka dị oke ọnụ, ya na ndị na-azụ ihe na-akwụ ụgwọ $ 800 ka $ 1000 maka nwa nkita ọ bụla.
Nke ahụ bụ mmalite. Ozugbo ị zụrụ nwa nkita gị, oge eruola ịzụta ihe oriri, chọta anụ ụlọ, nweta ọgwụgwọ eme, ma chee maka ọzụzụ.
Ka anyị kwusi ụgwọ kwa afọ.
Aha na mkpado: Lelee steeti gị iji hụ ma Pit Bull chọrọ mkpado pụrụ iche ma ọ bụ kwesịrị debanye aha ya. Nke a nwere ike ịdị ihe ruru $ 50.
Nyocha Ule Ọgwụ: $ 250
Pet Health Insurance: $ 225
Kwụ ụgwọ ma ọ bụ iche iche: $ 200
Gear na ihe eji egwuri egwu: $ 300
Nri: $ 120
Biko buru n'uche na ihe ndị a bụ naanị atụmatụ! Ọnụ ego kwa afọ ga-adabere na mkpa pụrụ iche nke nkịta gị, ụdị ndị ịzụrụ, ụdị atụmatụ mkpuchi ị họọrọ, yana ma ị na-eme ọzụzụ ma ọ bụ were otu ọkachamara.
Isi ihe dị ebe a bụ na ịkwesịrị ịghọta na nkịta adịghị ọnụ ala . Ọ bụghị ihe egwuregwu ụmụaka ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ mbụ wee hapụ ya ka ọ daa.
Obi gị nwere ike ịdị njikere maka nkịta, mana obere akpa gị ọ dị njikere?
Tupu ịme mkpebi, nọdụ ala wee rụọ ọrụ mmefu kwa ọnwa iji chọpụta ego ole ị ga-achọ iji nye Pull Bull nlekọta kwesịrị ekwesị na nkasi obi.
Ọ bụrụ na ịchọọ maka ndị na-azụ American Pit Bull Terrier online, ị ga-achọpụta ngwa ngwa na enwere ibu nke 'em. Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ APBT ị nwere ike ịlele:
Pitbulls Kacha Mma (Tennessee)
Ogbenye nke Pitbull nke Mugleston (Oklahoma)
Bredị a dị ebe niile, n’agbanyeghi aha ọma, na-eme ka o sie ike ikewapụ ndị na-azụ ya na akwa ọjọọ.
Achọrọ nlezianya ịchọta ịchọta nkịta kachasị mma maka gị. Iji Pit Bull, ị chọrọ ịchọ onye na-azụ anụ nwere agụụ maka ụdị a, na-ebute ụzọ mma n'elu ọtụtụ.
Nwa nkịta juru ebe niile, ndị bozos ahụ na-azụ ahịa ndị a jọgburu onwe ha ga-ekwu ma ọ bụ mee ihe ọ bụla iji mee ngwa ngwa. Nwere ike ibute nwa nkịta nwere ọbara na-adịghị mma, nke pụtara na ọ na-ebute ọrịa na nsogbu omume.
Gha amata na ichotala ihe nlere anya ma oburu
Ha nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke obodo Pitty. Chọọ ndị na-azụ ihe so na klọb ndị otu a na-akwanyere ùgwù. Ha ga - edebanye aha nkịta ha, na - egosi ibu ọrụ na ntinye onwe ha ijigide ọkọlọtọ ụdị.
Ha chọrọ ka gị na nne na nna ahụ nwee. Lelee nne na nna nke nwa nkịta iji hụ na ezigbo ahụike na ọbara siri ike. Omume nke nne na nna ya na-ekwu ọtụtụ ihe banyere omume pup nwere ike ime.
Ha na-akpọ gị òkù n'ụlọ ha: Onye na-azụ ụkpụrụ omume ọma nwere agụụ ka ị gaa na ogige ebe a mụrụ nwa nkịta ma zụlite ya. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwetatụ anya n'ọnọdụ nke ụlọ izizi nke puppy.
Ha na-echebara ọdịmma nke ụmụ nkịta ha echiche: Onye na-azụ ihe kwesịrị ịnye nkwenye ahụ ike, ntụnye aka vet, yana akaebe sitere n'aka ndị ahịa gara aga. Ha ga na-akpakọrịta mgbe mbụ ịzụrụ iji hụ na oge mgbanwe na-aga nke ọma.
American Pit Bull Terrier doro & nnapụta
N'ihi igwe nkịta, nkịta agha na ndị nwe ya na-enweghị ike ijikwa ibu ọrụ nke ụdị a, ọ bụghị ihe ijuanya na e nwere ọtụtụ Pull Bulls na-ejedebe na ebe obibi.
Ọ bụrụ na ịnakwere karịa gị, lee ndị a anya Ogige Egwu America Na-anapụta.
Ezigbo Rap (California)
A Rotta Plushụnanya Gụnyere (Minnesota)
Olulu ehi na-anapụta Central (Missouri)
Nnukwu Ngwá Ọrụ Ọjọọ Na-azọpụta (Pensụlvenịa)
Ntọala Ugbo Animal (New York)
Nkịta dị ka American Pit Bull Terrier
Mgbe ị gụsịrị nke a, ikekwe ị nwere ike ikwubi na Pit Bull abụghị maka gị. Nke ahụ dị mma! Bredị a bụ nke na-achọ oge na ibu ọrụ.
Enwela nkụda mmụọ! E nwere ọtụtụ ụdị anumanu ndị ọzọ nwere ntakịrị Pitty na ha. Chọpụta ngwakọta ndị a na-ewu ewu Pit Bull:
N'akpa uwe olulu
Olulu Ehi Boxer Mix
Olulu ehi Chihuahua Mix
Olulu Ehi Husky Mix
Olulu ehi ụlọ nyocha mix
Pitbull Mastiff Ngwakọta
Golden Retriever Pitbull Ngwakọta
Nke ahụ bụ ihechi! Ugbu a na ị nyochala nke ọma na American Pit Bull Terrier, ọ dịghị esemokwu na nke a bụ ụdị esemokwu.
Ọ na-ewe a puru iche nke onye nwe nkita onye nwere agụụ na oge inye Pittie ọzụzụ ọ chọrọ.
Bredị a zuru oke maka onye anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ njem otutu.
Onye nwere ikike maka nkịta a nwere ike iwepụta oge kwa ụbọchị iji wepụ Pitty ka ha nwee mmega ahụ.
Nkịta a na-arapara na onye nwe ya, ya mere, ọ gaghị enwe ike iguzoro ezinụlọ ya ogologo oge nke oge.
Ọ bụrụ n ’ibi n’obere ụlọ n’obodo, Pittie nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo egwuregwu maka gị. Dị ka Pool ehi bụ ọkara-sized na elu ike, a ụlọ nwere yad suut ya nọ n'ọrụ mkpa.
N'ikpeazụ, ọ dị gị mkpa inwe ndidi, na-agbanwe agbanwe, ma rara onwe gị nye ọzụzụ. Onye Pit Bull chọrọ onye nwe ya nke nwere ike ime ka ndị a alpha nke mkpọ iji kwụsị nnupụisi na ime ihe ike.
Kedu ihe ị chere gbasara American Pit Bull Terrier? Gwa anyị na nkwupụta!
Ewebata Healthy, Obi ụtọ na Victorian Bulldog
Brindle Pitbull (Ndị Ndu Ọhụrụ Na-eduzi Nkịta A Na-agba Ọhịa)
nwata nkịta aha maka pitbulls
ókè ala collie lab mix aja aja
nkịta na -ala azụ mana ọ naghị agbọ agbọ
ụlọ nyocha chọkọletị na ngwakọta ndị ọzụzụ atụrụ German
ole bụ black pugs